Wajiga Qarsoon Iyo Xiisaha Ku Duuggan Taariikhda Saddexda Murashax-Madaxweyne Ee Somaliland- Sooyaalkooda Taariikheed, Da’dooda, Aqoontooda, Khibradooda Shaqo, Hiwaayaddooda Iyo Shakhsiyadda Dhabta Ah Ee Mid Kasta — Q:2aad - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Wajiga Qarsoon Iyo Xiisaha Ku Duuggan Taariikhda Saddexda Murashax-Madaxweyne Ee Somaliland- Sooyaalkooda Taariikheed, Da’dooda, Aqoontooda, Khibradooda Shaqo, Hiwaayaddooda Iyo Shakhsiyadda Dhabta Ah Ee Mid Kasta — Q:2aad
Intiinii la socotay qormadan aan ku eegaynay is barbar dhigga saddexda Murashaxa ee u taagan doorashada madaxtooyada Somaliland ee Isniinta soo socota ka qabsoomi doonta dalka, qormadii horena waxa aan ku soo qaadnaay aqoontooda iyo wakhtigoodii dhallaanimo iyo goobaha ay ku dhasheen ee ay ku barbaareen, waxa ayunu hore ugu sii socon doonaa qaybta labaad oo aan ku eegi doono khibradoodii shaqo iyo sooyaalkoodii dhinaca siyaasadda iyo geeddi socodka jidka ay u soo mareen halka ay maanta taagan yihiin.
Faysal Cali Xuseen:
1974-kii illaa 1976-kii waxa uu noqday isu-duwaha Wasaaradda Hawlaha Guud ee Gobollada Baay iyo Bakool ee dawladdii Soomaaliya. 1976-kii illaa 1981-kiina waxa uu noqday agaasimaha waaxda qorshaynta iyo Dhismaha ee wasaaradda Hawlaha Guud. 1981-kii Illaa 1984-kiina waxa uu Faysal Noqday Madaxii Injineerrada Dawladda Hoose ee Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. 1984-kii Illaa 1990-kiina waxa uu Guddoomiye u ahaa shirkad xagga dhismaha ah oo lagu magacaabi jiray Ayaan oo ka hawl-galaysay Magaalada Muqdisho. Buburkii dawladdii Soomaaliya 1991-kii waxa ay isaga iyo qoyskiisuba u qaxeen dhinacaa iyo waddanka Finland waxaanu Jaamacadda Helsinki ee caasimadda dalkaasi ku qaatay aqoonta xidhiidhka caalamiga ah. Eng. Faysal Cali Waraabe oo ah nin Firfircoon (Dynamic) ah, arrimaha Bulshada iyo isku xidhkana ku wanaagsani waxa uu isla markii uu dalkaasi Finland soo degayba uu madax ka noqday ururrada Jaaliyadda reer Somaliland ee dalkaasi iyo waliba kuwa Qaaradda Yurub isaga oo ka soo shaqeeyey sidii dadkaasi isugu xidhmi lahaayeen waxna u wada qabsan lahaayeen, dalkooda Somaliland-na wax ugu soo tari lahaayeen. Sannadihii 1994-kii Illaa 1996-kii waxa uu Af-hayeen u ahaa koox Aqoonyahanno ah oo qurbe-joog ahaa oo u soo gurmaday wax ka qabashada iyo xallintii colaadihii reer Somaliland dhex maray kadib xorayntii dalka isaga oo door shariif ah ka qaatay sidii dagaalada sokeeye loo joojin lahaa dalkana nabadgelyo loogu soo dabbaali lahaa. Horraantii sannadihii 2000 waxa uu aasaasay oo dhidibada u taagay xisbiga Mucaaridka ah ee UCID oo uu sannadkan markii saddexaad ka tartamayo Murashaxiisa Madaxweyne isaga oo mudadaasi si weyn uga soo qayb qaatay dadaaladii kobcinta Nabadda, Dhismaha Dimuquraadiyadda iyo aasaaskii Somaliland. Faysal Cali Waraabe waxa uu leeyahay Xaas iyo sagaal caruur ah oo siddeed ka mid ahi rag yihiin iyo hal gabadh.
Faysal Cali Waraabe, dadka ugu dhaw ee mudada la soo shaqeeyey waxa ay wargeyska Foore u sheegeen in uu yahay shakhsi dabci ahaan furfuran, qabyaaladda aad u neceb, mabda’a Somaliland ku dheggan, xarrago badan inta badana ku labbista dharka suudhka ah midabadiisa bunniga iyo boorka. Xagga Cibaabada waa salaad xafid, dadkana aad ugu naxariista. Hiwaayaddiisa waxa ka mid ah Akhriska buugaagta iyo akhrista qur’aanka. Xagga Suugaanta gabayada aadbuu u xiiseeyaa balse dhinaca Heesaha iskuma wanaagsana waxaana maalin isaga oo dhagaysiga heesaha wax laga waydiiyey waxa uu sheegay in uu jecel yahay heesaha ay qaaddo Fannaanadda caanka ah ee Khadra Daahir halka uu sidoo kale sheegay in uu muddo dheer sidoo kale dhagaysan jiray heesaha uu qaado Maxamed Mooge sida heestii SAXARLA. Waa cod-kar gole joogle, saraaxi ah oo hadal cad, khudbadihiisana dadku aad u xiiseeyaan marar badana aad ugu qoslaan. Waxaanu inta badan ku caan yahay qaadashada Hangool gaaban oo uu gacanta midig ku qaato. Ma laha wax balwad ah, qaadka iyo sigaarkana aadbuu ula dagaalamaa waxaanu dadka ku boorriyaa in ay cunaan cuntooyinka caafimaadka u wanaagsan sida hilibka cad iyo khudaarta. Faysal Cali Waraabe dhinaca luuqadaha qalaad waxa uu si fiican ugu hadlaa luuqadaha Carabida, Ingiriisida, Ruushka iyo Finishka.
Muuse Biixi Cabdi markii uu waxbarashadiisii aasaasiga iyo tii sareba soo dhammaystay waxa uu si rasmi ah uga hawl-galay ciidamada cirka ee dawladdii Soomaaliya isaga oo mudadii uu aqoonta bayloodnimada soo bartay kadib dhawr jeer aqoon korodhsiyo kale ugu baxay dalal badan oo ku kala yaalla, Yurub, Asia iyo meelo kaleba. 1980-kii koox saraakiil sare ah oo ciidamada cirka ah oo uu ka jiraa waxa ay booqasho cilmi korodhsi iyo khibrad ahba u tageen waddanka Maraykanka iyaga oo noqday saraakiishii ugu horraysay ee kulamo ku qaata aqalka gaashaan-dhigga ee Pentagon loo yaqaano ee dalka Maraykanka. Waxa uu uga sii gudbay Gobolka Ohio oo uu cilmi korodhsi kale oo la xidhiidha ciidamada cirka ku soo qaatay.
5-tii Bishii May 1985-kii ayuu Muuse Biixi Cabdi ka goostay dawladdii Maxamed Siyaad Barre oo uu si toos ah ugu biiray ciidamadii dhaqdhaqaaqa waddaniga Soomaaliyeed ee SNM isaga oo ka mid ahaa saraakiishii reer Somaliland ee saluugay hab-dhaqankii Taliska Siyaad Barre. Mudadii uu SNM ka mid ahaa Muuse Biixi Cabdi waxa uu si weyn ugu soo ban dhigay haybaddiisa Hogaamineed ee dhinaca Milatariga iyo adkaysiga shaqo iyo naf-hurineed waxaanu ka qayb qaatay dagaalo badan oo uu xabadda laabta u dhigay isaga oo tiraba dhawr jeer ku dhaawacmay markii dalka gudaha loo soo galay. Waxa uu xilal sare ka soo qabtay jabhadda SNM isaga oo lagu xasuusto in uu ahaa shir-guddoomiyihii shirkii 1990-kii SNM ku soo dooratay Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo ku xigeenkiisa oo loo doortay Xasan Ciise Jaamac.
Dib u dhiskii dalka iyo nabadayntii beelaha Somaliland ayuu door weyn ku lahaa isaga oo xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ka noqday Wasiirka Daakhiliga door weyna ka qaatay yagleelkii dhismihii ciidamada kala duwan ee Somaliland illaa laga soo gaadhayay hannaankii hana qaadka dimuquraadiyadda Somaliland oo uu ka mid noqday aasaasayaashii ugu horreeyey ee urur-siyaasadeedkii SAHAN oo uu markii dambe uga soo wareegay kuna soo biiray xisbiga KULMIYE ee uu maanta ka sharraxan yahay oo uu muddo dheer ka soo ahaa Guddoomiye ku xigeen Iyo Guddoomiye-ba.
Muuse Biixi Cabdi dadka aadka u yaqaanaa waxa ay noo sheegeen in uu yahay shakhsi hal-adag, maamulka iyo nidaamka shaqana aad ugu wanaagsan. Dadka ay aadka isku bartaana ku sheegaan in uu uu aad uga duwan yahay sida dad badani ku xantaan in uu yahay nin kibir badan balse marka aad is barataan aad dareemayso in uu yahay nin saaxiibtinimo fiican oo kaftan badan. Waa nin cibaado badan. Muuse Biixi waxa uu jecel yahay labbiska wanaagsan waana nin xarrgo jecel, isaga oo inta badan qaata labbiska jaakeetka iyo jiiniska. Waa nin suugaanta Soomaalida iyo dhaqanka aad u xiiseeya aadna u kala yaqaana isaga oo xafidan gabayo badan. Waxa lagu tilmaamaa nin ku wanaagsan aqoonta uu u leeyahay habka dhaqan-dhaqaale iyo dhaqan-bulsheed ee Somaliland. illaa yaraantiisii waxa lagu yaqaanaa in uu yahay nin aan wax balwad ah lahayn. Waxa uu jecel yahay jimicsiga iyo lugta, cuntooyinka waddaniga ah ayuu inta badan ku nool yahay mana xiiseeyo majaalista iyo goobaha fadhi ku dirirka ah, fardo fuulka iyo raacista geella ayuu aad u xiiseeyaa.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro):
Dabayaaqadii sagaashamaadkii wax yar uun ka hor burkii dawladdii Soomaaliya Ambassador Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) waxa uu ka hawl-galay Safaaraddii Soomaaliya ku lahayd Waddanka Ruushka oo ahaa mid ka mid ah Quwadaha adduunka ugu waaweyn. In aad diblomaasi ka noqoto safaaradaha adduunku ku leeyahay waddanka Ruushka Caasimaddiisa Moscow ma aha arrin sahlan waana xil culus marka laga hadlayo muhiimadda dalkaasi adduunka u leeyahay maadaama uu yahay quwad weyn. Cabdiraxmaan Cirro xilal kala duwan ayuu safaaradda Ruushka ka soo qabtay isaga oo dhinaca kalena aad loogu xasuusto sidii uu u taban taabiyey waxna ugu qabtay dadkii reer Somaliland ee wakhtyadaasi u qaxayay qaaradda Yurub. Dad badan oo reer Somaliland ah ayaa aad uga mahad sheegta sidii uu wax ugu qabtay dadkii reer Somaliland ee dalkaasi Ruushka uga sii gudbayay qaaradda Yurub inteeda kale.
Muddo kadib Cabdiraxmaan Cirro waxa uu u guuray dhinacaa iyo waddanka Finland. 1997-kii illaa 1998-kii waxa uu noqday kaaliyaha koowaad ee Hay’adda socdaalka adduunka ee IOM ee dalka Finland. Isaga oo sidoo kale noqday xoghayaha koowaad ee xisbiga Social Democrat ee dalkaasi Finland. Jaaliyadaha reer Somaliland ee Yurub ayuu wax badan kala soo shaqeeyey kadibna waxa uu dalka dib ugu soo laabtay sannadkii 1999-kii isaga oo ka qayb galay aaskaasii xisbiga Mucaaridka ah ee UCID iyada oo ay saaxiibo aad isugu dhaw ahaayeen aasaasaha xisbigaasi Faysal Cali Waraabe. Doorashadii Golaha Wakiilada ee 2005 ayuu xildhibaan UCID ah isu soo taagay waxaanu noqday xildhibaankii ugu codadka badnaa xildhibaanada iska sharraxay Gobolka Saaxil. Isla markiiba is-bahaysi siyaasadeed oo ay samaysteen xisbigii uu ka sharraxnaa ee UCID iyo KULMIYE ayaa suurto galiyey in labadaasi xisbi qaataan dhammaanba saddexda Kursi ee Shirdoonka Golaha Wakiilada waxaana cod aqlabiyad ah Cabdiraxmaan Cirro loogu doortay in uu noqdo Guddoomiyaha Golaha Wakiilada oo uu ahaa illaa sannadkan 2017. Cabdiraxmaan Cirro bilawgii sannadkii 2012 ayuu dhidibada u tagay Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI ee uu maanta ka sharraxan yahay kaasi oo noqday Urur siyaasadeedkii KULMIYE ku soo xigay ee helay codadka ugu badan qaranka, meeshana ka saaray xisbiyo ka da’ weynaa. Waxa uu markii koowaad u tartamayaa mansabka Madaxweyne ee doorashada 2017. Waa abbo leh shan caruur ah oo deggan Caasimadda Hargeysa.
Cabdiraxmaan Cirro dadka yaqaanaa waxa ay ku tilmaamaan siyaasi qunyar socod ah oo aad u maskax furan, lehna sifooyin hogaamineed oo sare. Waa nin dulqaad badan oo afgaaban, saamayn weyna ay hogaamintiisa ku leedahay diblomaasiyaddu sida dadka yaqaanaa noo sheegeen. Cabdiraxmaan Cirro waxa la sheegaa in uu yahay nin shaqo badan, saacado aad u yarna seexda, ma laha wax balwad ah waana nin naxariis badan aadna ugu wanaagsan dad isku wadka. Waxa uu jecel yahay labbiska dharka safaariga ah ee isku joogga ah. Waa nin kaftan badan oo wakhtiga firaaqada jecel wax akhriska dadka ka ag dhawina ku tilmaamaan nin sida uu u af-gaaban yahay aan u aamusnayn balse sheeko iyo kaftan badan.
Shacabka Somaliland ayaa Isniinta 13-ka Bisha go’aamin doona ka saddexdan Murashax shanta sano ee socota dalka hogaamin doona, kaasi oo noqon doona Madaxweynihii 5aad ee qaranka tan iyo dib ula soo noqoshadii Madax-bannaanida Somaliland.